June 2011 | TechSectors
ဒီအကြောင်းကို မနက်တည်းက ရေးမလို့။ ဒါပေမယ့် တို့လို့တန်းလန်း ဖြစ်နေတဲ့ Recovery နှင့် MyanmarFamily ကို ရေးရင်ကောင်းမလား - ဒီ Google Plus ကို ရေးရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဘာတစ်ခုမှ မရေးဖြစ်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အဆုံးသတ်တော့ တစ်ချို့ သတင်းတွေက နောက်ကျပြီး ရေးတာမကောင်းဘူး။ ကိုယ့်လူတွေ သူများနောက်မှ လိုက်သိရသလို ဖြစ်နေမှာစိုးတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ပြောင်းလဲမှု အသစ်ကိုပဲ အရင်ဆုံး မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ် ဆိုပြီး Google Plus ( Google + ) အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်နေ့တည်းက Google Home Page မှာ Google Bar က အဖြူရောင်ကနေ black bar ဖြစ်သွားတာ အားလုံးလည်း သတိထားမိကြမှာပါ။ ဒါကို တစ်ချို့လည်း သတိထားမိကြလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့လည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အရောင်ပြောင်းယုံလေးလောက်ပဲ ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ထင်ကောင်းလဲ ထင်မိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် black bar ပြောင်းလဲရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သေးသေးဖွဲဖွဲမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ Google + လို့ ခေါ်တဲ့ Google ရဲ့ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက် social project တစ်ခု စတင်အခြေချခြင်းပါ။
Google+ ဆိုတာဘာလဲ ?
Google+ ဆိုတာ Social network လောကမှာ ပြိုင်ဘက်အားလုံးကို နလံမထူနိုင်အောင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ပိုင်းထားတဲ့ facebook အတွက် ပြိုင်ဘက်ကောင်းလို့ပဲ ပြောရမလား။ ဒီအကြောင်းကို နားလည်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး Social network တွေရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ကို ပြန်သုံးသပ်ရလိမ့်မယ်။ Social network တွေ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်က လူအားလုံးရဲ့ အတွင်းစိတ် သဏ္ဍန်မှာ အစဉ်အမြဲ ကိန်းဝပ်နေတဲ့ မျှဝေမှုဆိုတဲ့ စိတ်အစဉ်ကို ထမြောက်ရှင်သန်နိုင်အောင် ပုံဖော်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရာကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာ။ ဆိုလိုတာ ကိုယ်သိထားတာလေးတွေ သူများကို သိစေချင်တယ်။ သူ သိထားတာလေးတွေလည်း ကိုယ်ကြည့်ချင်တယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေ သူ့ကို မျှဝေချင်သလို - သူဘာတွေ စိတ်ဝင်စားသလဲ ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ်က ခံစားချင်တယ်။ ဒါတွေကို လက်တစ်ဆုပ်စာ လူနည်းစု အချင်းချင်း လည်ပတ်မျှဝေနေကြတဲ့ အဖြစ်ကနေ အင်တာနက် ဆိုတာပေါ် ရောက်လာတော့ Social network ဆိုတာ ဖြစ်လာပြီး sharing ပုံစံကလည်း ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်သွားတယ်။ အရင်ကလို အိမ်ဘေးနားက / ခြံချင်းကပ်လျက် / တစ်ရပ်ကွက်ထဲနေ / တစ်မြို့တည်းသား ဆိုတာမျိုးကို ဝေမျှတဲ့ အဆင့်မဟုတ်တော့ဘူး။ နိုင်ငံနဲ့ ချီလာတယ်။ လူမျိုးပေါင်း စုံလာတယ်။ ကမ္ဘာနေရာအသီးသီးက လူတွေ ပါလာကြတယ်။ ဒီလိုလားချက်တွေ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းကနေပြီး လူအများစုအတွက် အနီးစပ်ဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်တော့ facebook ဆိုတဲ့ Social network က နာမည်ရသွားတယ်။
အခု Google ကနေ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Google+ ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပဲ။ Google+ ကို သူတို့က "Google + You" လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်တယ်။ ဆိုလိုတာ Facebook လိုမျိုးပဲ Google+ ဆိုတဲ့ Social network တစ်ခုတည်းကနေ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ၊ ကိုယ့် ဓာတ်ပုံ သူ့ဓာတ်ပုံ ၊ ကိုယ့် ဗွီဒီယို သူ့ ဗွီဒီယို ၊ သူနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ conversations အားလုံး တစ်နေရာတည်းကနေ အသုံးပြုနိုင်ပြီ။ Google + service မှာ ကဏ္ဍခွဲ ( ၅ ) ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးထားပြီး တစ်ခုချင်းရဲ့ သဘောက ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် အကြမ်းဖျဉ်း မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
+Circles: ဒီအကြောင်းကို မပြောခင် ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး သတိရသင့်တာ relationships တွေအကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့တွေ အင်တာနက် ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုထဲကို ရောက်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာတွေ ရှိလာကြတယ်။ တကယ်တမ်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် သူငယ်ချင်း ဆိုတာတိုင်းက ကျွန်တော်တို့အတွက် အရင်းနှီးဆုံးလူတွေ မဟုတ်ဘူး။ အနွေးထွေးဆုံး ဖေးမသူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်း အူမ ချေးခါးမကျန် သိသင့်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိကြတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Social network တစ်ခုထဲမှာ နေလေ့ရှိကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Sharing လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့အခါ ဒီအကြောင်းအရာကို တစ်ခြားလူတွေ သိဖို့ သင့်တော်ပါ့မလားဆိုတာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် ဖြစ်ဖြစ် ပြန်တွေးခဲ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ Social network ကမ္ဘာမှာ ဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ပဲ ပြောရလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာ ကိုယ် Sharing လုပ်မယ့် အကြောင်းအရာကို ဘယ်သူတွေကိုတော့ သိစေ။ ဘယ်သူတွေကိုတော့ မသိစေနဲ့ ဆိုတာမျိုး ဖန်တီးဖို့ မလွယ်ဘူး။ Sharing မလုပ်ချင် မလုပ်နဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အကုန်လုံး ပေးသိရင်သိ။ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စကိုပဲ ပေးသိစေမယ် ဆိုတာမျိုးက ဖန်တီးလို့ ရပေမယ့် သုံးစွဲဖို့ မလွယ်တဲ့ အခြေအနေတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကို Google+ မှာပါတဲ့ +Circles က ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်မျှဝေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Contacts ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေအားလုံးထဲက ခင်မင်ရင်းနှီးမှု lvl အမျိုးအစားအလိုက် drag and drop ဆွဲယူပြီး Group တစ်ခုဖွဲ့ - ပြီးမှ ကိုယ် သိစေလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို Sharing လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ သိစေလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို သိစေလိုတဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုတည်းမှာပဲ လည်ပတ်နိုင်အောင် Circles တစ်ခုသဘောမျိုး ထိန်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ လည်ပတ်နေတဲ့ Sharing လောကရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြောင်းလဲမှုပါပဲ။
သူရဲ့ သဘောကို မြင်သာအောင် ဒီနေရာကနေ သွားပြီး Circles tab အောက်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မြင်သာချင်ရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကိုကြည့်ပါ။
+Sparks: Web ထဲမှာ လည်ပြီ ပတ်ပြီ ဆိုတည်းက စိတ်ဝင်စားစရာဆိုတာ အများသား။ လူဖြစ်လာပြီ ဆိုတည်းက တစ်သက်လုံး တစ်မျိုးတည်း ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ လူရယ်လို့မှ မရှိတာ။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်နေ့ ဟင်းတစ်မျိုး ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းစားနေကြတာပေါ့ Sharing ဆိုတာကလည်း ဒီသဘောပဲ။ Web ထဲကို လည်ပြီ ပတ်ပြီဆိုရင် ဟိုသတင်းလေးတွေ့ သဘောကျပြန်ပြီ။ ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေ့ ကြိုက်သွားမိပြန်ပြီ။ ဒီအကြောင်းအရာလေးဖတ် သိမ်းထားချင်ပြန်ပြီ စသဖြင့် လူတိုင်း ဖြစ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို သဘောကျစရာတွေတော်တော်များများ စုနေလို့လည်း အင်တာနက်ဆိုတာ လူငယ်တွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ တမဟုတ်ချင်း ရေပန်းစားလာခဲ့တာပေါ့။ အင်တာနက်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာများတာ မှန်ပေမယ့်လို့ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာ မှန်သမျှကို အချိန်ကုန်ခံ အလုပ်ပျက်ခံပြီး ဘယ်သူမှ တစ်ချိန်လုံးတက်ရှာမနေနိုင်ကြဘူး။ အဲ့တော့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်လာလဲဆို မအားတာရယ် မရှာဖြစ်တာရယ် ပေါင်းပြီး ကိုယ်သိချင်တာက ဘာမှ မသိရတော့သလောက် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအခက်အခဲကို ပြေလည်စေဖို့ Google+ မှာပါတဲ့ +Sparks က online sharing engine တစ်ခုလိုမျိုး ကူညီပေးပါတယ်။ Web ပေါ်ကနေ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်စေ တစ်ခုမက ဖြစ်စေ ရိုက်သွင်းထားပြီး Add Interest လုပ်ထားလိုက်တာနဲ့ Sparks ကနေပြီး ကိုယ်သိလိုတဲ့ Topic အလိုက် သတင်းတွေ ( feed ) ကို အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် ရှာဖွေ ပို့ဆောင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖတ်ကြည့်လို့ သဘောကျတာရှိရင်လည်း သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေတွေကို Circles ကနေ ဖြစ်စေ - တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဖြစ်စေတိုက်ရိုက် ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ သဘောကို မြင်သာအောင် ဒီနေရာကနေ သွားပြီး Sparks tab အောက်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မြင်သာချင်ရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကိုကြည့်ပါ။
+Hangouts: တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ Online ပေါ်တက်ရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Hi ရိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်ရတာ အရမ်း တစိမ်းဆန်တယ်လို့များ မထင်မိကြဘူးလား။ တစ်ဖက်လူက ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်နေမှန်း မသိ။ မျက်နှာလည်း မြင်ရတွေ့ရတာမဟုတ်။ ကိုယ်က Hi လိုက်လို့ တစ်ဖက်က ပြန်မ Hi ရင်ပဲ တစ်စိမ်းဆန်တာလိုလို အဖက်မလုပ်တာလိုလို မအားပဲ မအားတာလိုလို။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ အွန်လိုင်းလောကမှာ လက်ဖျားကလာတဲ့ စကားလုံးတွေထက် face to face ကနေ ရတဲ့ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေ့က ပိုလေးနက်တာ အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ။
Google+ ရဲ့ +Hangouts မှာတော့ ဒါမျိုး မရှိတော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုလိုက်တယ်။ အားလုံးကို ပျော်ရွှင်စေတယ်။ လေးနက်စေတယ်။ အချိန်တိုင်းကို Face-to-face-to-face ပဲ ကုန်ဆုံးစေလိမ့်တော့မယ်။ သူရဲ့ သဘောကို မြင်သာအောင် ဒီနေရာကနေ သွားပြီး Hangouts tab အောက်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မြင်သာချင်ရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကိုကြည့်ပါ။
+Instant Upload: လူတိုင်းမှာ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဝါသနာ တစ်မျိုးစီတော့ ရှိတတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော့် ဝါသနာတစ်မျိုးကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ။ ရှုခင်းတွေ - နောက် လူတွေရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား မျက်နှာသွင်ပြင်တွေ ရိုက်ရတာ ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံဆိုတာ ကိုယ်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်းရိုက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း ခံစားလို့ ကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ရိုက် - ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေလည်း တစ်ခြား သူငယ်ချင်းတွေကို ပြ - ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဝေဖန်ခံ - စသဖြင့် အဲ့လို ပုံစံလေးက ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် မဟုတ်ပါလား။ ဒီ အခြေအနေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီနိုင်ဖို့ Google + ရဲ့ +Instant Upload က ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ကိုယ့် ဖုန်းကနေ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ရိုက်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ Google+ ကနေ ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို Cloud ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ private album ထဲကို Instant Upload လုပ်ပေးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကို ဝင်ကြည့်ခွင့် permission ပေးလိုက်တာမျိုးတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ကိုယ် စိတ်အေးလက်အေး ရှိတဲ့အချိန်ကျတော့မှ ဘယ်ပုံတွေကိုတော့ ဘယ်သူ့ကို ပြမယ်ဆိုပြီး Google+ ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ Share လုပ်လို့ ရတယ်။ အဆင်မပြေပါလား
သူရဲ့ သဘောကို မြင်သာအောင် ဒီနေရာကနေ သွားပြီး Instant Upload tab အောက်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မြင်သာချင်ရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကိုကြည့်ပါ။
+Huddle: တစ်နေရာစီ အချိန်တစ်ခုစီမှာ ရှိနေကြတဲ့ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုတည်းကို အားလုံး ခေါင်းချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်ကို မလွယ်ဘူး။ တစ်ယောက်ကို ပြောရင် နောက်တစ်ယောက်က မသိဘူး။ အဲ့ဒီ့ မသိတဲ့ တစ်ယောက်ကို သိအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားပြန်တော့ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်က နောက်အစီအစဉ်တစ်မျိုး ပြောင်းချင်ပြန်ရော စသဖြင့် အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ လူ့စိတ်ကို instant messenger တွေလည်း မတတ်နိုင်ကြတော့ဘူး။ ဒီ အခက်အခဲကို Online လောကနဲ့ မကင်းသူတိုင်း ခံစားဖူးကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် +Huddle မှာ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကို လူအားလုံးနဲ့ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ဦးတည်ဆွေးနွေးနိုင်အောင် အရိုးရှင်းဆုံး ပြောင်းလဲပေးထားတယ်။ Group chat လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ခုဆို Circle ထဲမှာနေပြီး ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ် - ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ စက္ကန့်တစ်ခု ပြောင်းလဲသွားတိုင်း တစ်ယောက်ချင်းစီကို သိစေနိုင်ပြီ။ ဒါဟာ +Huddle ရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။
သူရဲ့ သဘောကို မြင်သာအောင် ဒီနေရာကနေ သွားပြီး Huddle tab အောက်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မြင်သာချင်ရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကိုကြည့်ပါ။
လတ်တလော အခြေအနေမှာတော့ Google+ project က စမ်းသပ်ဆဲကာလ Field Trial ပါ။ လူနည်းစုနဲ့ စမ်းသပ်လည်ပတ်ဆဲ ကာလမို့ လူတိုင်း သုံးလို့ မရသေးပါဘူး။ သူ့ကို စမ်းသပ်ချင်မယ် ဆိုရင် လောလောဆယ်မှာ invitation ရဖို့လိုပါတယ်။ နောက်မကြာခင် လပိုင်းမှာ Google+ မှာ ကျွန်တော်တို့ ဆုံတွေ့ကြပါစို့။
Windows7မှာ သုံးမယ့် 3rd party themes တွေကို ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ ဒီ Thread အတွက် လိုအပ်မယ့် Software တစ်ချို့ မိတ်ဆက်ရင်း ဒီနေ့ အဆုံးသတ်ပို့စ် ရေးနိုင်ပါပြီ။ Themes ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ကျွန်တော် စုဆောင်းထားသမျှ တိုလီမုတ်စ Software အားလုံး တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း တင်ထားပေးပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ် links တွေကိုတော့ အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်နဲ့ အတူ ရရှိလာမယ့် folders များစာရင်းကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။ folder တစ်ခုချင်းစီမှာပါမယ့် software တွေ ဖိုင်တွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ မိတ်ဆက်ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။
ဒေါင်းလုပ်ပြီးလို့ ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ရင် Theme Accessories ဆိုတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခု ရလာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ထဲကို ထပ်ဝင်ရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖိုဒါ ( ၁၄ ) ခုနဲ့ ဖိုင်တစ်ခု တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Read me.txt - တစ်ခြားဘာကိုမှ မလေ့လာသေးခင် ဒီဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး အရင်ဆုံးဖတ်ပါ။ သူ့ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဖိုဒါအလိုက် ဘယ်ကယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ links တွေ - ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက် ရှိတဲ့နေရာတွေဆီ ကျွန်တော် လမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်။
Best Icons For Windows - ဒီထဲမှာတော့ Theme ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ အတူ တွဲဖက်အသုံးပြုသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး Icons တွေ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Gdipp - Gdipp ဆိုတာ Windows text render ကို Mac OS နဲ့ Linux distributions က ပုံစံတွေအတိုင်း ဖြစ်လာအောင် ပြင်ယူနိုင်တဲ့ Software ပါ။ ကွာခြားချက် အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Original System Files - Theme ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ Errors တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ မူရင်း System Files တစ်ချို့ကို ပြန်လည်အစားသွင်းနိုင်အောင် ဒီဖိုဒါအောက်မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Resource Hacker - သူကတော့ Windows executable resources ကို view and modify လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အားလုံးသိကြတဲ့ Resource Hacker ဖြစ်ပါတယ်။
Start Orb Changer - Start Orb Changer ဆိုတာ Windows ရဲ့ Start Button ကို Change တဲ့ App လေးတစ်ခုပါ။ နှစ်မျိုးထည့်ပေးထားပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Windows7Start Button Changer v 2.6 (for SP1 and old W7 version without update).exe ကိုတော့ Recommend ပေးပါတယ်။
Take Ownership - system files တွေကို ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ ownership မရပဲ ပြင်ယူလို့ မရပါဘူး။ ownership အဆင့်လိုက် လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တော်တော်လေး အချိန်ပေးရပါတယ်။ လက်ပေါက်ကပ်ပါတယ်။ ဒါကို ကလစ်နှစ်ချက်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် TakeOwnership.reg file တစ်ခု စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ သူ့ကို installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ အခါ system files တွေကို ပြင်ဆင်ချင်ရင် အရင်ဆုံး Right click ထောက်ပြီး Ownership ယူပါ။ ပြီးမှ ပြင်ဆင်ပါ။ အသေးစိတ် အသုံးပြုပုံကို ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Theme managers - Theme managers ကတော့ 3rd party themes တွေကို Install လုပ်ဆောင်ရာမှာ လွယ်ကူသထက် လွယ်ကူအောင် ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အသုံးပြုပုံတွေကို Read me file တွေမှာ ကြည့်ပါ။
Theme Patchers - 3rd party themes တွေကို Install လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် System files တွေကို patch လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုဖို့ Theme Patchers တွေ စုစည်းပေးထားတဲ့ folder ဖြစ်ပါတယ်။
Windows7Aero Blur Tweaker - Windows7Aero Blur Tweaker ဆိုတာ Windows7Aero မှာ မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံကို ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံစံဖြစ်လာအောင် ပြင်ယူနိုင်တဲ့ Tweaker ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။
Windows7Logon Background Changer - သူကတော့ အမြင်ရိုးနေတဲ့ logon background ပုံစံကို နှစ်သက်ရာ wallpapers တွေနဲ့ အစားထိုးနိုင်အောင် ပြင်ယူနိုင်တဲ့ Logon Changer ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာပါ။ ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါ။
Windows7Logon Screen Rotator - သူလည်းပဲ Windows7Logon Background Changer နဲ့ သဘောတရားတူပါတယ်။
Windows7Navigation Buttons Customizer - သူကတော့ Windows7ရဲ့ navigation buttons တွေကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် Buttons Customizer ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာပါ။
Windows7Start Buttons - သူကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ Start Orb Changer နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုဖို့ Start Buttons တွေဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
XWindows Dock - သူက Mac နဲ့ Linux မှာ သုံးကြတဲ့ Dock တွေလိုမျိုးပဲ Windows မှာ သုံးဖို့ Dock ပါ။ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာပါ။
Download Theme Accessories!!
Theme Accessories.part1.rar (95.4 MB)
Theme Accessories.part2.rar (95.4 MB)
Theme Accessories.part3.rar (95.4 MB)
Theme Accessories.part4.rar (95.4 MB)
Theme Accessories.part5.rar (38.7 MB)
ကျွန်တော် အသိနောက်ကျနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ Facebook က သိပ်မဝင်ဖြစ်တော့ ဘာတွေ ပြောင်းလို့ ဘာတွေကောင်းမှန်းတောင် သိပ်မသိတော့ဘူး။ ဟိုတစ်နေ့ကမှ Facebook ထဲ ခဏဝင်ပြီး လယ်သွားကြည့်တော့ အပင်တွေလည်းသေ - မြေတွေလည်း ခြောက်နဲ့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး :( ပြန်တော့ မစိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဲ့လိုနဲ့ ဟိုဒီကြည့်ရင်း တစ်ခြား ဘာတွေများ ထူးခြားတာရှိမလဲ လိုက်ကြည့်တာ အကောင့်ထဲ စာတွေတော်တော်များများ ဝင်နေတာတွေ့လို့ ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ အဲ့မှာ Facebook မှာ Email စသုံးလို့ ရနေတာ သိခဲ့ရတယ်။ အဲ့တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး 12-02-2011, 09:02 AM တုန်းကတော့ Facebook ကအသစ်ပေးတဲ့Emailစနစ်ယူမယ် ဆိုပြီး ကိုပေါ်ဦး ရေးပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ Request an Invitation အဆင့်ပဲ - တကယ်စသုံးလို့ မရသေးဘူး။
ခုတော့ ရနေပြီ။ ဘယ်တုန်းတည်းက စရနေတယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်ဘူး။ လုပ်နည်းကတော့ မခက်ဘူး။ Facebook ထဲကို ဝင်လိုက်ရင် Home ကိုသွားပြီး Messages ထဲကို ဝင်လိုက်။
သူက ခုလို စကြိုလိမ့်မယ်။
Next ဆက်သွားလိုက်ရင် ကိုယ့် Facebook name ကို အခြေပြုပြီး ကောင်းနိုးရာရာ နာမည်တွေ ပြလိမ့်မယ်။ တစ်ခုမှမကြိုက်ရင် အောက်ဆုံး box မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည် ဖြည့်လို့ ရတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်ရိုက်တဲ့ နာမည်က တစ်ယောက်ယောက် ယူထားပြီးသား / သုံးလို့ မရရင် Unavailable လို့ ပြလိမ့်မယ်။ သုံးလို့ ရရင်တော့ Available ပေါ့။ ကျွန်တော် myanmarfamily လို့ ရိုက်ကြည့်တာတော့ ရသေးတာ တွေ့တယ်။ သဘောကျရင် Activate Email ကို ဆက်သွားလိုက်။ ဒါဆို ကိုယ့်နာမည်နဲ့ facebook email တစ်ခုရပြီ။
အဲ့လိုနဲ့ အကောင့်တစ်ခုရတော့ Gmail ထဲဝင် -compose mail တစ်ခုလုပ်ပြီး -@facebook.com ကို ပို့ကြည့်လိုက်တယ်။
ဝင်ပါတယ်။ အောက်မှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်းပါ။
Facebook မှာ တစ်နေကုန် နေလေ့ရှိသူတွေအတွက်တော့ Gmail ကိုတောင် ဖွင့်ဖို့လိုမယ် မထင်တော့ဘူး။
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကွန်ပြူတာဆိုတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့တိုင်း ထိတွေ့ပြီး သုံးသာ သုံးနေကြတာ - အဲ့ဒီ့ Operating system အပေါ် တကယ်ရော နှစ်သက်ကျေနပ်မှု ရှိရဲ့လား ??
ဒီမေးခွန်းကို ကိုယ့်စိတ်ထဲကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး ဖြေကြည့်ပါ။
တကယ်တော့ အရင့်အရင်က ကျွန်တော်တို့ Windows XP နဲ့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေခဲ့တယ် - အဲ့နောက် Windows Vista - နောက် Windows7... OS တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းသွားတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း သူတို့ပြောင်းတဲ့ နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့ကြတယ် - တကယ်တမ်း OS တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြောင်းသုံးဖြစ်ခဲ့သမျှ အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ရင် တကယ်လိုအပ်လို့ ပြောင်းခဲ့တာလား ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောရမယ် - Features တွေ Security တွေ ဘာတွေဘယ်လို အားသာချက် ရှိတယ် ဆိုတာတွေကို နောက်မှာ ထားလိုက်ဦး - တကယ်တမ်း Windows7စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးနေကြသူ ၁၀ဝ မှာ ၇၀ လောက်က Features တွေကောင်းလို့ Security တွေ အားသာချက် ရှိလို့ ဆိုတာတွေထက် အရင်သုံးနေကျ OS တွေထက် အသွင်ပိုဆန်းပြီး အမြင်ပိုလှလို့ သုံးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ကောင်း မှန်လိမ့်မယ်။
အဲ့တော့ ခု Windows7ထွက်တာလည်း နှစ်နှစ် ပြည့်တော့မယ် - တော်တော်များများလည်း Windows7မှ Windows7ဖြစ်နေကြပြီ - Windows7နဲ့ အတော်လည်း ယဉ်ပါးနေကြပြီ - လူဆိုတဲ့ သဘောက အလှအပတော့ ကြိုက်ကြစမြဲပဲ - Windows7ဘယ်လောက်လှပါတယ် ပြောပြော သူ့ထက်သူ ပိုလှအောင် ကျွန်တော်တို့တွေ Themes အသစ်တွေပြောင်းတယ် - Wallpapers လှလှလေးတွေ ရှာတယ် - တင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သိထားဖို့ သင့်တာ ခုလက်ရှိချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကြတဲ့ Themes တွေဆိုတာ Windows7မှာ Themes - Change လိုက်တယ်လို့သာ ပြောတာ တကယ်တော့ သူတို့ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း Colours နဲ့ Walpapers ပြောင်းသွားတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ တစ်ခြားဘာမှမှ ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းတာ။ ဒါကို အားလုံးလည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်တယ်။ အဲ့တော့ Themes ပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်တိုင်း အရိုးအရှင်းဆုံး ပုံစံလေးနဲ့ စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ Themes တစ်ခု ကိုယ့် စက်ထဲ ရောက်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ပြင်ယူကြမလဲ။ ဒါလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကနေ့ချိန်ထိ မြန်မာဖိုရမ်တွေ ၊ ဘလော့တွေနဲ့ နည်းပညာမျှဝေတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ ဖော်ပြတာမတွေ့မိသေးတဲ့ ( ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက် ) Windows7Themes ပြုပြင်နည်းတစ်ခုပါ။ ဘာလို့ မဖော်ပြကြသေးတာလဲ ဆိုတော့ သတိမထားမိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သတိထားမိလို့ လက်ရှိသုံးနေကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေလည်း မိသားစုဝင်တွေကို ဒီအကြောင်း မိတ်ဆက်မပေးရသေးဘူး။ အဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ Thread ကို စရေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခု ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ Themes ပြင်ဆင်နည်းတွေက ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးနေကျ Themes တွေကို Click တစ်ချက် နှစ်ချက် ပေးယုံနဲ့ ပြောင်းလို့ မရဘူး - သူ့ကို သုံးချင်ရင် သာမန်သုံးနေကျ Themes တွေထက် ၄ - ၅ ဆင့်လောက် ပိုပြီး ပြင်ဆင်ရတယ်။ အဆင့်တွေကို နားလည်ထားဖို့လည်း လိုတယ်။ သာမန်ထက် နဲနဲလေး လုပ်ရမယ့် အဆင့်ပိုများလို့ ဒီ Thread ကို Windows7Themes အား အဆင့်မြှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ကြီး ခက်ခက်ခဲခဲ နက်နက်နဲနဲ အကြောင်းအရာတွေ ရေးသွားမယ့် Thread တစ်ခုမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး -
မိသားစုဝင်တွေ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရှုချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ် - ဘာတွေသိထားဖို့လိုမယ်။ ဘယ်အဆင့်တွေ Software တွေ အသုံးချရမယ်ဆိုတာ မိတ်ဆက်ရှင်းပြ သဘောမျိုးရေးပေးသွားမှာပါ။ ပြင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ တွေ့မြင်ရမယ့် Windows7ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အလှအပတွေကို ကနဦး ခံစားနိုင်အောင် မိတ်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုယ့်စက်မှာ သုံးထားတဲ့ Windows7Themes တွေနဲ့ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အပြင်အဆင်တွေမှာ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိသလဲ - ဒါကို မိသားစုဝင်များ ကိုယ်တိုင် သုံးသပ်ပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်စက်က အပြင်အဆင်ကိုပဲ ကိုယ် သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ရက်တွေ ဒီ Thread ကို ဖတ်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး - ကျော်ချသွားလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့ အပြင်အဆင်ကို သဘောကျမယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ရက်တွေ ဒီ Thread ကို မပြတ်တမ်း စောင့်ဖတ်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အချိန်အများကြီး မရတာမို့လို့ အရင်ရေးဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ Thread တစ်ချို့နဲ့ ဒီ Thread ကို ဖြေးဖြေးရှင်း ညှိပြီး ရေးသွားပေးပါ့မယ်။
Windows7Themes တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးတဲ့ အခါ အရင်ဆုံး သိထားဖို့ လိုတာက ဒီလို အမြင်ရှင်းပြီး ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်ဆန်းတဲ့ Themes တွေဘယ်မှာ ရနိုင်လဲ ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုလာပါတယ်။ အဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုကတော့ DeviantArt ပါ - Wallpapers, Themes, Icons ... စသဖြင့် ကျွန်တော် ဘာပဲလိုလိုအဲ့မှာပဲ အမြဲ သွားရှာဖြစ်တယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ပျံ့နေသမျှ Themes တွေ Icons တွေ တော်တော်များများကလည်း အဲ့မှာ အခြေပြုပြီး ထွက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပေမယ့် တော်တော်များများကို Free ပေးထားတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ DeviantArt ကနေပြီး စိတ်ကြိုက်ရှာ ဒေါင်းလုပ်ချထားတဲ့ Themes ( 55 ) ခု ရှိပါတယ်။ Themes တွေကို ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားရင် နောက်ပို့စ်တွေမှာ အဲ့ဒီ့ Themes တွေအားလုံးကို မိသားစုဝင်များ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဝေမျှပေးသွားပါမယ်။
Windows customization လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ 3rd party themes တွေကို Windows က အသုံးပြုခွင့် မပေးပါဘူး - ကျွန်တော် အရင်တစ်ခါ ရေးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ Windows7Themes လိုမျိုး Microsoft ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ Themes မျိုးတွေကိုသာ Windows က လျှောလျှောရှုရှုနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်။ 3rd party themes ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာက ခွဲခြားဖို့ မခက်ပါဘူး - ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ Windows7Themes file တစ်ခုခုကို Double click သာ ပေးကြည့်လိုက်ပါ -
နဂိုသွင်ပြင်နေထားကနေ ပုံစံပြောင်းပေးသွားတယ်ဆိုရင် 3rd party themes မဟုတ်ဘူး - Double click ပေးလည်း ဘာမှ ထူးခြားမလာပဲ နဂိုပုံအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါ Windows က လက်မခံတဲ့ 3rd party themes စသဖြင့် အကြမ်းဖျဉ်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ Windows ကနေ Default အနေနဲ့ လက်မခံတဲ့ 3rd party themes တွေကို ကိုယ့်စက်မှာ install လုပ်ချင်တဲ့ အခါ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမလဲ။ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အားလုံးထဲက မိသားစုဝင်တိုင်းအတွက် အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့နဲ့ အရင်ဆုံး စပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
( 1 ) CustoPack Tools
အားလုံးထဲမှာ End users တွေ အတွက် သုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးက CustoPack Tools ပါ - Windows XP (32-bit), Windows Vista (32 or 64-bit), Windows7(32 or 64-bit) အားလုံးမှာ သုံးလို့ ရအောင် CrystalXP.net team ကနေ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ CustoPack Tools နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးပြုနည်းနဲ့ တကွ တစ်ခြား သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ အားလုံးကို Frequently Ask Questions အဖြစ်နဲ့ သူတို့ ရေးထားပေးပြီးသား ရှိပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ပြောရရတော့ CustoPack Tools ကို သုံးဖို့အတွက် အဆင့် နှစ်ဆင့်လိုတယ်။ အရင်ဆုံး CustoPack Tools ကို ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Install အရင်လုပ်ထားရမယ်။ အဲ့ဒီ့ Tools ကို သွင်းရတဲ့ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ် install လုပ်ချင်တဲ့ Themes တွေကို တစ်ခုကနေတစ်ခု အချိန်းအပြောင်း လုပ်တဲ့ နေရာမှာ Manually ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပဲ Click လေးပေးယုံနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်အောင် သွင်းထားရတာ။ အဲ့တာပြီးသွားရင် ကိုယ် Install လုပ်ချင်တဲ့ Themes တွေကို ဒီနေရာမှာ စိတ်ကြိုက် ရွေးယူ ဒေါင်းလုပ်ချပါ။
ရလာတဲ့ CustoPack တွေကို CustoPack Tools သုံးပြီး ဘယ်လို Install လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။ Youtube ကြည့်လို့ ရသူများ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကနေ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အားလုံး သွင်းပြီးလို့ Restart ပေးပြီး ပြန်တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်သုံးတဲ့ Windows7Themes က အရင်သုံးနေကျ Themes တွေနဲ့ မတူပဲ တစ်မူထူးခြားပြီး လှပနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ နောက်ပိုင်း သုံးရတာ ငြီးငွေ့လာလို့ CustoPack Tools နဲ့ Themes တွေကို Uninstall ပြန်လုပ်ချင်ပြီ ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Youtube ကြည့်လို့ ရသူများ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကနေ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
CustoPack Tools ကို အရင်ဆုံး မိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က Users တိုင်းအတွက် သုံးရလွယ်လို့ပါ - ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Themes သုံးလို့ မရဘူး - ကိုယ်တွေ့ထားတဲ့ တစ်ခြား Themes တစ်ခုကို CustoPack Tools ကနေ တိုက်ရိုက် ပြောင်းမပေးနိုင်ဘူး - အဲ့တော့ CustoPack Tools မသုံးပဲ တစ်ခြား ကိုယ်တွေ့ထားတဲ့ 3rd party themes တစ်ခုကို Windows မှာ ဘယ်လို install လုပ်မလဲ ?? ဒါကို နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
လူတိုင်းလည်း သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာလည်း ပြောထားခဲ့ဖူးပြီ။ Windows7မှာ 3rd party themes လို့ ခေါ်တဲ့ custom themes တွေကို တိုက်ရိုက် ပြောင်းလဲသုံးစွဲခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ 3rd party themes လို့ ပြောရင် နည်းနည်း နားရှုပ်နိုင်တာမို့ သူ့အကြောင်းနည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်။
3rd party themes နဲ့ Windows7မှာ ပါပြီးသား Themes တွေက ဘာကွဲလဲ ဆိုရင် Windows7မှာ နဂိုပါလာတဲ့ Themes တွေဖြစ်ဖြစ် - Microsoft ကနေ တရားဝင် အလကား ပေးသုံးထားတဲ့ themes တွေ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက Themes တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာ Themes ပြောင်းလိုက်တယ်လို့သာ ပြောတာ တကယ်တော့ သူတို့ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း Colours နဲ့ Walpapers ပြောင်းသွားတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ တစ်ခြားဘာမှမှ ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းဘူး။ အတိအကျ ပြောရရင် Windows Explorer ပုံစံတွေ အောက်မှာ ပြထားသလို မပြောင်းဘူး။
taskbar ပုံစံတွေ Start button တွေ တစ်ခြား icons တွေ အောက်မှာပြထားသလိုမျိုး ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
3rd party themes တွေမှာကျတော့ သူ့ themes ကို ပြောင်းသုံးလိုက်တာနဲ့ ခုနက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေ အားလုံးပြောင်းသွားတယ်။ Colours နဲ့ Walpapers ပြောင်းယုံ လောက်ထက် စာရင်တော့ အမြင်ပိုဆန်းသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲလို အမြင်ပိုဆန်းတဲ့ 3rd party themes တွေ သုံးဖို့ ဆိုတာ system files တွေကို patch လုပ်ရတာရှိတယ်။ အဲ့တာကြောင့် အလုပ်မတတ်ရင် ပြဿနာ တက်လွယ်တာမို့ Windows မှာ Default အနေနဲ့ 3rd party themes တွေကို အသုံးပြုခွင့် မပေးထားတာ။ အရင်တစ်ချိန်တုန်းကတော့ system files တွေကို patch လုပ်ရတာ တော်တော်လေး လက်ပေါက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ third party tools တွေလည်း ရှိနေပြီမို့ system files တွေကို patch လုပ်ရတာ မခက်တော့ပါဘူး။ third party tools အမျိုးမျိုး ရှိပြီး အားလုံးထဲမှာ လူသုံးများတာကတော့ UxTheme နဲ့ Universal Theme Patcher ပါ။ ကဲ ဒီတော့ patching files တွေ ဘယ်လိုလုပ်မယ်။ themes အသစ်တွေ စိတ်ကြိုက် ဘယ်လိုသွင်းမယ်ဆိုတာ စလိုက်ကြရအောင်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် နှစ်သက်ရာ 3rd party themes တွေကို Windows7နဲ့ Windows Vista မှာ မိသားစုဝင်များ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ Windows XP မှာလည်း ရပါတယ်။
ဒိနေရာမှာ ကျွန်တော် Universal theme patcher အသုံးပြုနည်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပထမဆုံး လုပ်ရမှာ Universal theme patcher နောက်ဆုံး version ကို Download ချပြီး extract လုပ်ထားပါ။ အဲ့ထဲမှာ .exe ဖိုင်နှစ်ခုပါလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုက 32 bit Windows အတွက်ပါ။ နောက်တစ်ခုက 64 bit အတွက်ပါ။ 32bit နဲ့ 64bit ကို မခွဲတတ်ရင် 64 bit နှင့် 32 bit OS များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ဆိုပြီး ရေးထားပေးတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် system ပေါ်မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဖိုင်ကို administrator mode ကနေ ( Run as administrator ) run ပါ။ အဲ့လို run လိုက်တာနဲ့ application ကနေပြီး files ဘယ်နှစ်ခု patch လုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ပြပါလိမ့်မယ်။
yes ပေးလိုက်ရင် ဘယ်ဖိုင်တွေကို patch လုပ်ရမယ်ဆိုတာ application ကနေ ပြပါလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဖိုင်အသီးသီးရဲ့ ဘေးက patch ဆိုတဲ့ button ကို click ပေးပြီး patch လုပ်လိုက်ပါ။
System files တွေကို ပြောင်းလဲမှု လုပ်ရလို့ သိပ်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ နေစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ နောင်တစ်ချိန်မှာ 3rd party themes တွေကို မသုံးချင်တော့ရင် ဖြစ်ဖြစ် - မူရင်းအတိုင်း system files တွေကို ပြန်လိုချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် restore button ကနေ ပြန်ပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Patching complete ဖြစ်ရင် System files ပြောင်းလဲမှုတွေ effect ဖြစ်အောင် computer ကို restart ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Restart ပေးပြီးတာနဲ့ explorer, taskbar, icons စသဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားပြီးသား third party themes တွေကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
third party themes တွေကို အသုံးပြုဖို့အတွက် ကိုယ် အသုံးပြုမယ့် themes folder ( .theme file နှင့် .msstyles file ပါဝင်သော ) ကို သက်ဆိုင်ရာ "%windir%\_Resources\_Themes\_" folder အောက်ကို Copy ကူးထည့်ပေးရပါမယ်။ %windir% ဆိုတာ ကိုယ့် စက်အသီးသီးအလိုက်က "Windows" directory ကိုဆိုလိုတာပါ။ အဲ့လို ကူးထည့်ပြီးတာနဲ့ .theme file ကို double-click ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် theme ကို apply လုပ်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ် install လုပ်မယ့် themes တွေမှာ theme folder တင်မက ExplorerFrame.dll, shell32.dll, Explorer.exe စသဖြင့် တစ်ခြား System files တွေပါ အစားထိုးဖို့ တစ်ခါတည်း ပါလာမယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ third party themes တွေကို install လုပ်ရလွယ်အောင် Windows Themes Installer အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သူ့ကိုသုံးပြီး third party themes တွေနဲ့ အတူပါလာတဲ့ System files တွေကိုပါ အလွယ်တကူ သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Windows Themes Installer အသုံးပြုနည်းကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့် theme folder နဲ့ အတူပါလာတဲ့ system files အမျိုးအစားတွေပေါ် မူတည်ပြီး boxes တွေကို ဖော်ပြပါအတိုင်း check လုပ် Browse ကနေတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ system files တွေကို ခေါ်ယူပြီး Install theme ကို click ပေးယုံပါပဲ။ တကယ်လို့ သဘောမကျရင် default system files တွေကို ကြိုက်တဲ့အချိန် Restore default system files ကနေတဆင့် သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် စုဆောင်းထားတဲ့ 3rd party themes တွေကို နောက်နေ့တွေမှာ စုစည်းဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေကတော့ ကျွန်တော် Deviant Art ကနေ နိုင်သလောက် စိတ်ကြိုက် ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ Themes တွေပါ။ အထဲမှာ Themes က ၅၅ ခုပဲ ပါပေမယ့် ပမာဏကတော့ 670MB လောက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရလာရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Themes တွေထည့်ထားတဲ့ folder တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ themes file, Read me နဲ့ theme ကို install မလုပ်ခင် preview ကြည့်နိုင်အောင် photo တစ်ခုပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်။
Read me ကို ဖွင့်ဖတ်မယ် ဆိုရင် theme ကို ဘယ်ကနေ ယူလာတဲ့ URL ကို ကျွန်တော် ထိပ်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ internet ရှိရင် သက်ဆိုင်ရာ link ကို လိုက်ပြီး latest ဖြစ်မယ့် theme ကို ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် instruction ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ themes တွေကို အပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးတဲ့ နည်းတွေသုံးပြီး ပြင်ယူကြည့်ပါ။
Best Themes for MyanmarFamily.org
Best Themes for MyanmarFamily.org.part1.rar (95.4 MB)
Best Themes for MyanmarFamily.org.part2.rar (95.4 MB)
Best Themes for MyanmarFamily.org.part3.rar (95.4 MB)
Best Themes for MyanmarFamily.org.part4.rar (95.4 MB)
Best Themes for MyanmarFamily.org.part5.rar (95.4 MB)
Best Themes for MyanmarFamily.org.part6.rar (95.4 MB)
Best Themes for MyanmarFamily.org.part7.rar (52.3 MB)
2:39 AM LeaveaComment
June 14 ရက်နေ့က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခု ပြန်ပြောပြချင်တယ်။ မှန်ရာပြောရရင် တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ပြောင်းလဲသမျှ နည်းပညာတိုင်းကို လိုက်ဖတ်ပြီး ပြန်ပြောနေရတဲ့ ဘဝမျိုးကနေ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေကို လွတ်မြောက်စေချင်တာ ကြာပါပြီ။ သူများထုတ်ထားတဲ့ Product အတွက် အသုံးချနည်းကို ပြန်ရှင်းပြနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးထက် ကိုယ့် Product ကို သူတို့သုံးတတ်အောင် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ ဘဝမျိုး တကယ်ကို ဖြစ်စေချင်တာပါ။
ခု ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ချိန်တုန်းက Google Instant ဆိုပြီး တစ်ခါ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ Google ရဲ့ အခြေအနေက Search queries ဆုံးတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ် ရှာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Enter ခေါက်စရာ မလိုပဲ ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပေါ့။ ခုတော့ သူတို့တွေ နောက်ခြေလှမ်းသစ်တစ်ခုဆီ လှမ်းသွားကြပြီ။ Instant Pages တဲ့။
Instant Pages ၏ ထူးခြားချက်များ
Instant Pages feature မရှိခင်တုန်းက အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် Search Results ကမှာ ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို Click ပေးလိုက်တဲ့ အခါ သက်ဆိုင်ရာ Websites ကို သူက အရင်ဆုံး Loading ဆွဲပေးတယ်။ အဲ့လို Loading ဆွဲတဲ့ အချိန်မှာ ရှာဖွေသူကြည့်ရှုချင်တဲ့ Websites မှာ ရှိနေသမျှ အကြောင်းအရာကို Browser မျက်နှာစာမှာ ဖော်ပြပေးနိုင်အောင် အဲ့ဒီ့ Website ရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်က ဓာတ်ပုံတွေ၊ Links တွေ .. စတဲ့ ဖော်ပြဖို့လိုအပ်သမျှ sub-resources တွေအားလုံးကို Loading ဆွဲရတယ်။ Loading ဆွဲပြီ ဆိုတည်းက Connection ပေါ် အများကြီး မှီခိုသွားပြီ။ Connection ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ အင်တာနက်သုံးနေကြတဲ့ သူတွေအတွက် Webpage တစ်ခုကို Loading ဆွဲတဲ့ ကြာမြင့်ချိန်ဟာ ဘယ်လောက်မှ မသိသာပေမယ့် Connection မကောင်းတဲ့ နေရာကနေ ကြည့်ရမယ့် သူအတွက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Webpages မှာ Loading ဆွဲရမယ့် ပမာဏများရင် များသလောက် မိနစ်နဲ့ ချီပြီး ကြာမြင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
Connection ကောင်းတဲ့ နေရာကနေ သုံးမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီကြာမြင့်ချိန်က စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ကွာဟချက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကို ပြေလည်စေနိုင်အောင် ခု Google ကနေပြီး Prerendering technology ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Instant Pages feature ကို လာမယ့် Google Chrome မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါပြီ။ သူရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Prerendering technology ကို သုံးထားတဲ့အတွက် Loading ဆွဲရတဲ့ ကြာမြင့်ချိန် သက်သာသွားမယ်။ Instant Pages ဆိုတဲ့အတိုင်း Search Results မှာ ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက နှစ်သက်ရာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို Click ပေးလိုက်တာနဲ့ အရင်လို Loading ဆွဲလို့ စောင့်နေရတဲ့ ကြာမြင့်ချိန် ဆိုတာမျိုး မရှိတော့ပဲ ကြည့်ချင်တဲ့ စာမျက်နှာကို တန်းကနဲ ချက်ချင်းမြင်ရမယ်။ ဘယ်လို ကွာခြားသွားမယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် စမ်းသပ်ချက်ကို တိတိကျကျ မြင်တွေ့ချင်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ video clip လေးကို တစ်ချက် ကြည့်ကြည့်ပါ။
Google နဲ့ လက်ပွန်းတတီး နေနေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒီ feature လေးက တော်တော်လေး အသုံးတည့်ပါတယ်။ Prerendering technology က လတ်တလော Chrome Dev Channel မှာ စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်ပါ။ စမ်းသပ်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ယူနိုင်ပါတယ်။ Dev channel က Google Chrome ကို တင်ပြီးသွားရင် Prerendering technology ကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် ဒီစာမျက်နှာကို သွားပါ။ ကိုယ့်ကြည့်နေကျ Websites တွေထဲက အမြဲ loading ကြာတယ်လို့ ထင်မိတဲ့ Site တစ်ခုရဲ့ URL ကို ဖြည့်ပြီး Prerender လုပ်ပါ။ သူက link တစ်ခု ထပ်ချပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တာကို click လိုက်ရင် အရင်ကလို loading အကြာကြီး စောင့်ဖို့မလိုပဲ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Webpage ကို ချက်ချင်းမြင်လာရတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ prerendering is disabled ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ Enable ပေးနည်းကို Ensuring you have prerender turned on ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ သူ့ဖော်ပြချက်အတိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
အရင်ရက်တွေက ပြောဖို့ မှတ်ထားတာလေးတွေထဲက တစ်ခု ပြောစရာ ရှိသေးတယ်။ Online app လေးတစ်ခုအကြောင်းပါ - Facebook အကြောင်းသိကောင်းစရာများ အောက်မှာ လာရေးတာဆိုတော့ Facebook နဲ့ ဆိုင်တာပဲပေါ့။
Intel ရဲ့ The Museum of Me အကြောင်းပါ။ တစ်ချို့လည်း နေ့တိုင်းနီးပါး စာဖတ်လေ့ ရှိတော့ သိပြီး ဖြစ်လောက်ပြီ။ အဲ့ဒီ့ online app လေးက တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ သူ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ကိုယ့် Facebook profile က အချက်အလက်တွေ ( ဓာတ်ပုံ - တည်နေရာ - သူငယ်ချင်း ... ) ကိုယူပြီး Virtual museum တစ်ခုလို လုပ်ပေးပါ။ အဲ့တာကြောင့်မို့လည်း Museum of Me လို့ နာမည်ပေးထားတာပေါ့။ Virtual museum ဆိုတဲ့အတိုင်း အထဲကို ရောက်သွားတာနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပုံတွေ - ကိုယ်နေတဲ့ နေရာ စသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ သတ်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုချည်း Museum ထဲမှာ လှည့်ပတ်ကြည့်နေရသလို မြင်ရလိမ့်မယ်။
လုပ်ဆောင်နည်းကလည်း ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် မရှိဘူး။ ဒီနေရာကနေ သွားလိုက်ရင် အစစာမျက်နှာမှာ Connect to Facebook ဆိုတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲ့ကနေ တစ်ဆင့် ကိုယ် Facebook account ကို ဝင်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ယုံပဲ။ အဲ့မှာ သူ့အလိုလျှောက် ကိုယ့် Profile မှာ ရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ - သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ - တည်နေရာတွေ - လတ်တလော ကိုယ့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စုဆောင်းပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကိုယ့်ကို Museum ထဲကို ခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ Museum ဆိုတဲ့အတိုင်း အထဲမှာ ကဏ္ဍလိုက်ကို အကန့်လေးတွေ အခန်းလေးတွေ ခွဲထားတယ်။ Robots တွေ ရှိတယ်။ တကယ့်ကို ပျော်စရာ ကမ္ဘာလေးပါပဲ။ ကိုယ့် Museum လေးကို သဘောကျလို့ Screen cast လုပ်ထားချင်ပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာမိသားစုဝင်တွေ တင်ပေးထားကြတဲ့ FastStone Capture နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားနှစ်သက်ရာ screencasting tools တွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ကျွန်တော်ကလိထားတဲ့ Video clip လေးတစ်ခုပါ။
3:46 AM LeaveaComment
အိမ်ထောင်ပြုတာလား - ချစ်တဲ့သူနှစ်ယောက် ပေါင်းရမယ် ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ပြုတာ ပျော်စရာပေါ့ - ဒါပေမယ့် မြန်မာမှု မြန်မာမှုနဲ့ အလုပ်မဟုတ်တာတွေကို မြန်မာမှု ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဇရာချဲ့နေကြတာတော့ တော်တော်ကို စိတ်ဆင်းရဲဖို့ ကောင်းတယ်။
ခုခေတ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုတယ် ဆိုတာ ချစ်တဲ့သူနှစ်ယောက် ပေါင်းကြတာမှ မဟုတ်တာ - ဟိုဘက်မိဘ ဒီမိဘ ကျေနပ်အောင် ကလေးတွေက မပြေလည်တာကို ပြေလည်ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး မိဘချင်း သဟဇာဖြစ်အောင် လိုက်ညှိနေရတဲ့ ခေတ်ပဲ။ မိဘဆိုတဲ့ သူတွေကလည်း သားသမီးကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်နဲ့ ဆောင်ပုဒ် အမျိုးမျိုး ပြောင်းချိတ်ပြီး ကိုယ့်သားသမီး အသက် ၂၅ - ၃၀ ရောက်တဲ့ထိ ဘာတစ်ခုမှ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မပေးဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းဆိုတာထက် အဲ့လူနောက်က ပါလာမယ့် အထုတ်အထည်ပဲ လိုက်ကြည့်နေကြတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ မင်း ဆရာဝန် ဆိုတာလည်း အထင်မကြီးလည်း - အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်လည်း မယုံဘူး - မင်း အဖေဘာကောင်လည်း - မင်းအမေ ဘာစီးပွားရေးလုပ်လဲ ဆိုတာပဲ လိုက်ကြည့်နေကြတယ်။ အဲ့လို လူတွေ အဲ့လိုအတွေးအခေါ်တွေ ကြားမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရတဲ့ ကလေးတွေက တောကြည့်တောင်ကြည့် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မယုံ - ကိုယ့်အနာဂတ်လည်း ကိုယ်မယုံ - ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်လည်း ကိုယ်မယုံ။ ချစ်လည်း မယူရဲ။ မချစ်လည်း ယူရဲ။
သိန်းလေးငါး ခြောက်ဆယ် အကုန်အကျခံ မင်္ဂလာပွဲတွေ လုပ်။ တတ်နိုင်ရင်တော့ လုပ်ကြပေါ့။ မတတ်နိုင်တဲ့သူကျတော့ မင်္ဂလာပွဲကနေ ပြန်ရတဲ့ လက်ဖွဲ့က အရင်းမှ ကျေပါ့မလားနဲ့ ရင်တမမ - မတတ်နိုင်တဲ့ သူကျတော့လည်း မိန်းကလေးမိဘကို ကြောက်ရ။ ကိုယ့်ကောင်မလေး မျက်နှာငယ်မှာ စိုးရ။ ဒီနေ့ယူလို့ ရနေတာ နောက်လကို ရွှေ့။ နောက်လ ယူမယ့်ဟာ နောက်နှစ်ကို ရွှေ့။ ရွှေ့တာတွေများတော့ အဲ့မိန်းကလေးက မရွှေ့တဲ့ ယောင်္ကျားကိုယူ။
သိန်းလေးငါးဆယ်တန် မင်္ဂလာပွဲကြီး လုပ်ပြီး တကယ်ရော ပျော်ခဲ့ရလား - အဲ့တာမျိုးတော့ ဘယ်သူမှ ပြန်မတွေးဘူး - အစဉ်အလာတွေ မြန်မာမှုဆိုတာတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီး အနာဂတ်ရှိရာဆီ မျက်စိမှိတ်ပြီး တိုးဝင်ကြတယ်။ မျက်လုံးပြန်ပွင့်တော့ ချောက်ကမ်းပါးစွမ်း ရောက်နေပြီ။ ဒါတွေကို ခေါင်းရှုပ်မခံချင်ကြတော့ နောက်ဆုံး အဖြေမဟုတ်တဲ့ နောက်ကို ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ လိုက်တယ်။ ငွေရှိတဲ့ သူ ရှာယူတဲ့။
မင်္ဂလာပွဲဆိုလို့ ဟိုးတစ်လောလေးက Jill နဲ့ Kevin တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး လုပ်တာ ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။ သူတို့ မင်္ဂလာပွဲက အရိုးစွဲနေတဲ့ မြန်မာမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကြည့်ရင်တော့ မင်္ဂလာ ရှိချင်မှ ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် သိန်းလေးငါးဆယ် မကုန်ဘူး - မင်္ဂလာပွဲပြီးလို့ ရှေ့ရေးအတွက် ဘုရားတနေစရာ မလိုဘူး - အနာဂတ်အပူကို ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေနဲ့ မလုံ့တလုံဖုံးပြီး စားပွဲဝိုင်းတိုင်းကို တစ်ဝိုင်းဝင် တစ်ဝိုင်းထွက် လိုက်နှုတ်ဆက်နေဖို့ မလိုဘူး။ မင်္ဂလာပွဲပြီးလို့ ရလာမယ့် လက်ဖွဲ့ငွေကို ဟိုဘက်ဆွေမျိုး ဒီဘက်ဆွေမျိုး သူပိုင်တယ် ကိုယ်ဆိုင်တယ်နဲ့ လုနေစရာမလိုဘူး။ မင်္ဂလာတော့ရှိချင်မှ ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အပြုံးတွေ ရှိတယ် - ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ချက်တွေ ရှိတယ် - အနာဂတ် အိပ်မက်တွေလည်း ပုံဖော်ပြီးသား ရှိချင် ရှိနေနိုင်သေးတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး လူငယ်တွေကို ပိုက်ဆံရနည်း သင်မပေးကြစမ်းနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှာဖွေနည်းကိုသာ ခင်ဗျားတို့ ပေးကြစမ်းပါ။
ဒါပေမယ့် ကျုပ်မှာ -
၁၀ ဒေါ်လာ ကို အရစ်ကျပေးစနစ်နဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး။
ခြောက်လ တစ်ခါလောက် ပြင်နေရတဲ့ ခပ်စုတ်စုတ် ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့
ခင်ဗျားတို့ သတ်လည်း ဘယ်တော့မှ မသေတဲ့ ယုံကြည်ချက် ရှိတယ်။ ကျုပ်ဖြစ်အောင် ဆက်သွားမယ်။